Fanohanana ny asam-pitsarana : Voavolavola ny drafitrasa
Published Date: 18 août 2021
Mahatoky ny mpiara-miombon’antoka sy ireo mpanohana amin’ny ezaka fampandrosoana ny asam-pitsarana. Tontosa androany Alarobia 18 Aogositra 2021 tetsy amin’ny Foiben’ny Tetikasa Fanohanana ny Fitsarana eto Madagasikara na « Projet d’Appui à la Justice de Madagascar » (PAJMA) etsy Anjohy, ny fivorian’ny Komity Teknika (COTECH). Lahadinika ny famolavolana ny drafitrasa hatramin’ny faran’ity taona 2021 ity, ary koa ny fanaovana tatitra tamin’ny enim-bolana voalohany. Fivoriana izay natao tamin’ny alalan’ny « visioconférence » ary natrehin’ireo solontenan’ny mpamatsy vola toy ny avy amin’ny « Agence Française de Développement » (AFD).
Nizara telo ireo drafitrasa : ny fanohanana ny fandraharahana ny fonja, ny fanohanana ny sehatry ny Fitsarana, ary ny fanohanana ireo Foibem-pitantanana isan-tsokajiny eto anivon’ny Ministeran’ny Fitsarana.
Marihina fa amin’ny Alarobia 25 Aogositra 2021 manomboka amin’ny 9 ora sy sasany maraina no hanatontosana ny fankatoavana ireo drafitrasa ireo, eo anivon’ny fivorian’ny Komity Mpitantana (COPIL), izay hatao ato amin’ny Tranom-bokin’ny Ministeran’ny Fitsarana eto Faravohitra. Anisan’ny mandrafitra ny COPIL ny avy amin’ny Vondrona Eoropeanina (Union Européenne) sy ny avy amin’ny Masoivoho Frantsay eto Madagasikara (Ambassade de France à Madagascar), ny Sekretera Jeneralin’ny Ministeran’ny Fitsarana ary ireo Tale Jeneraly rehetra mpiara-miasa aminy.